နှစ်ချို့ကော်ဖီ: February 2010
Posted by moehlaing nya at 12:55 PM
Posted by moehlaing nya at 9:08 PM
ကျင့်သားရနေတဲ့ ကျွန်မကတော့ ရန်ကုန်သူပေါ့ …
မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါတတ်တဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေရှိတယ်
သူခိုးလက်က သူဝှက်လုတာတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေး
စေတနာကတော့ အသပြာမရှိရင် နတ္ထိပဲ
သူတို့တွေထိုင်ဖို့ လက္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ် …
အလုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ ဘီယာဆိုင်တွေလဲရှိတယ် …
Posted by moehlaing nya at 8:39 PM
Posted by moehlaing nya at 9:07 AM
ငါတို့ ယာဉ်ငယ်ကို ထားခဲ့ရတယ်..။
Posted by moehlaing nya at 10:52 AM
ကဗျာဆရာ အခေါ်ခံရတာ မကြိုက်လို့ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေး ခံရတဲ့အခါတိုင်း အမေရိကန် ရုပ်ရှင်သုံး ဘန်းစကား “အက်ဖ်” စတား စတား စတား အီးအာရ်နဲ့ အမြဲရှေ့ကခံသုံး ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ရှက်ရွံ့မှုမပျောက်သေးတာနဲ့ ဒီနေရာမှာ အရေးအသားသမားလို့ပဲ သုံးနှုန်းပါတယ်..။ တကယ်တမ်းလည်း နောက်နောင် တစ်မျိုးဖြစ်ဦးမှာပါ။ ခုပဲ နှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် လောက်ပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လား
လူမျိုးအလိုက် တစ်ဦးချင်း အသိဥာဏ်ဖြစ်မြောက်ဖို့ တစ်ခါတစ်ခါ လူ့ဘောင်အဟောင်းကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် သစ္စာရှိရှိ ဖြိုခွဲပစ်ရပါတယ်။ ပြဲဟသွားတဲ့နေရာတွေမှာ ၀ှက်ကွယ်ထားတဲ့ လူမှုဓလေ့အသစ်တွေကိုလည်း ပွင့်ပွင်လင်းလင်း ထုတ်ပြန်ရတဲ့အခါ မျိုးမှာ အရေးအသားသမားအနေနဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် မှန်ထဲပြန်ကြည့်ဖို့ ခက်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ကြုံရပါတယ်
လှေကားထစ်တွေလို ရှင်းရှင်းမဟုတ်တဲ့ ဓလေ့အသစ်တွေနဲ့ အရှိန်ရရှေ့ဆက် လာတဲ့ လူ့အဖြစ်အသစ်တွေမှာ မရှိသေး မကြားဖူးလို့ မျက်နှာပူနေမယ့် ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူများကို တွေ့ထိမိတ်ဆက်ပေးတာမှာ အရေးအသားသမားတွေပဲ တတ်နိုင်ကြပါတယ်…။ တစ်ချို့ပန်းတွေ ပွင့်ပြီးကြွေကျသွားတာ ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ပါဘူး။ သိစရာလည်း မလိုပါဘူး
ရှေ့လျှောက် ကဗျာလို့ ပဲခေါ်ကြမယ့် ကဗျာပုံပန်းသဏ္ဍန်ထဲ အကျုံးဝင်မယ့် သဘောင်္တည် လေယာဉ်တည် လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ သံသတ္တုပြားတွေ အတိအကျ ဖြတ်ကပ်တပ်ဆင်ရတဲ့ အောက်ခြေလုပ်သားတွေရဲ့ ခေတ်မီကာကွယ်ရေး ၀တ်ပုံစားပုံဟာ ဘွတ်ဖိနပ်ကအစ ဦးထုပ်မျက်စိကာ တွေအထိ စိတ်ချလုံခြုံရပါတယ်။ ဒီလိုအဆင့်မြင့် တက္ကနိုလိုဂျီ နည်းပညာလောင်စာကို အသုံးပြုရတဲ့အတွက် အခြားလိုက်လို့မဆုံးနိုင်တဲ့ ပညာရပ်နယ်ပယ်တွေ လိုပါပဲ။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာစကားနဲ့ အလုပ်ခံထားရတာလား၊ မြန်မာစကားကို ကျွန်တော်လုပ်နေတာလား ကိစ္စမှာ ဒုတိယလမ်းကို မူတည်ရွေးချယ်ခဲ့မှုအပေါ် ခုလို တစ်ယောက်ချင်း တစ်ယောက်ချင်း တွေ့ထိသိရှိလာကြတော့တာပါပဲ…
Posted by moehlaing nya at 5:51 PM
Posted by moehlaing nya at 4:42 PM
Posted by moehlaing nya at 4:35 PM
Ní gá duitafheiceáil dom dán
Jy hoef nie na My nie sien nie gedig
أنت لست بحاجة إلى أن نرى قصيدة لي
Vous n'avez pas besoin de me voir poème
당신이 나를 볼 필요는 없어 시를
Вы не должны видеть меня поэма
Nie musisz do mnie wierszem
Nemusíte so mnou báseň
U hoeft me niet te zien gedicht
คุณ ไม่ จำเป็น ต้อง เห็น ฉัน ประพันธ์
Ви не повинні бачити мене поема
မင်းလက်ခံမှ မနက်ဖြန် နေထွက်မှာမဟုတ်သလို
မင်းအသိဥာဏ် တစ်ထွာတစ်မိုက်နဲ့ လိုက်လိုက်ဝေဖန်ဖို့
Posted by moehlaing nya at 10:33 PM
ငါအခု လူအကုန်လုံးကို မယုံတော့ဘူး
Posted by moehlaing nya at 10:56 AM
ကောင်မလေး ...မင်းကို ငါ တကယ်ချစ်ခဲ့ပါတယ်..
ဒါပေမဲ့ ကွာ မင်း Daddy က
ငါ့ ကို ကြည့် မရ ဘူး ဘာကြောင့် လဲ
ငါ စဉ်းစား ကြည့် တယ်
အေးလေ ...သူက တော် တာ ကိုး
သူ့ ရဲ့ဝန်ထမ်းလစာလေး နဲ့
မင်းတို့ ကို သိန်းထောင်ကျော်တန်အိမ်နဲ့
Honda Ascot Car နဲ့ GSM ဖုန်း နဲ့
အပြည့်အစုံ ထားနိုင် တာ ကို
ငါ က တော့ အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ
ခု ထိ အမေ ကျွေး တာ ထိုင်စား နေရသေးတယ်လေ…
မင်း Daddy ကပြောတယ် ..ငါ့ကို
အသောက်အစား ကလဲ မကင်းဘူးတဲ့
အရမ်းဆိုးတယ် အပေအတေ တဲ့
ကြုံသလိုမူး တယ် တဲ့
သူရဲ့ ၀န်ထမ်းလစာလေးနဲ့ …
Gold label သောက်နေ တဲ့ အချိန်မှာ
ငါက Grand royal လောက် ပဲ သောက် နိုင် တာကို
555 Gold စီးကရက် ဖွာနေတဲ့ အချိန် မှာ
ငါက ခြင်္သေသုံးကောင်ဆေးပေါ့လိပ် သောက်နေရတာလေ….
မင်း Daddy က ငါ နဲ့မင်းကို သဘောမတူဘူး…
ဒါပေမဲ့ မင်း ရဲ့ Daddy ကို ပြော လိုက် ကောင်မလေး..
ငါ က အလုပ်အကိုင် အတည်တကျ မရှိ သေးဘူး
ဒါပေမဲ့ သူ့လို ၀န်ထမ်းလစာလေး နဲ့ ..
Honda Ascot မစီး ဘူး ငါ မိုးရွာရွာ နေပူပူ..
ဒီ အရွယ် အထိ အမေ့အိမ် မှာ စားနေပေမယ့်
ငါ လိပ်ပြာသန့် တယ် စိတ်သန့် တယ် …
ဆေးပေါ့လိပ် တစ်ထုတ် မြန်မာကျပ်ငွေ ၂၀၀ နဲ့
ငါ လိပ်ပြာသန့် သန့် စိတ် သန့်သန့် နဲ့
၀ယ်သောက် ရဲ တယ် ….
နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေပိုင်တဲ့ သယံဇာတတွေကို
မင်း Daddy မျှော်လင့်သလို
ငါ့ဘ၀ထဲကို ခုန်ချလာဖို့ အတင်းအကျပ်မတိုက်တွန်းလိုပါဘူး
မင်း Daddy မေးရင်ပြောလိုက်ပါ
ငါတို့ မဆုံခင်ကတည်းက ဝေးခဲ့ပြီးကြပြီလို့…
ဒီခေတ်ထဲမှာ ငါတို့ မတော်တဆ ချစ်မိတာတစ်ခုပဲ
ငါဘက်မှာ အပြစ်ရှိခဲ့တာပါ ကောင်မလေးရယ်….။
Posted by moehlaing nya at 8:32 PM
၁၁း၂၀
ဆိုင်ခဏ စောင့်ထားပေးပါဗျာ…. သရဲကပြော
၁၁း၅၂
ငယ်ငယ်ကလို စာတစ်ပုဒ်ပြီးတိုင်း အောက်ခြေက မျဉ်းတားစရာမလို
အမေက လက်ရေးမလှလို့ လက်ဆစ်ကို
ဠ အလုံးရေ ၁၀၀
၁၉၈၆ ဘက်ထရီမီးသီးလေးက လိမ္မော်သီးလိုလင်းလို့
Posted by moehlaing nya at 12:03 PM
သူ့ကိုလူရွှင်တော် ချာလီလို့ သူတို့ ခေါ်ကြတယ်..။
တစ်ခုသော မျောက်နှစ်မှာ မောင်ချာလီကို မွေးတယ်
မွေးကတည်းက စကားကို မပီကလာ စပြောခဲ့သတဲ့
ကံမကောင်းချင်တော့ သူ့ခမျာ ယိုယွင်းနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာမှ
မျက်လုံးလေး ပေကလပ် ပေကလပ်နဲ့
မင်းမှာ သူများတွေလို ပေးစရာ ဘာလက်ဆောင် ရှိလဲလို့
ချာလီက ပြုံးရင်း ပြန်ပြောတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော်အပြုံးတစ်ခုကိုသာ ယူပါဆရာတဲံ
သူမှာ အပြုံးတစ်ခုကလွဲလို့ သူများကို ပေးစရာ ဘာများရှိလို့လဲ
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကသူ့ကို လူရွှင်တော် နဲ့ မျက်လှည့်အတတ်ကို
ချာလီဟာ အရပ်တကာလှည့်ပြီး မြို့တကာ ရောက်ခဲ့တယ်
လူတွေက ကြိတ်ကြိတ်တိုး ချာလီကို အားပေးကြတယ်
ချာလီ မျက်နှာမှာ အရောင်တွေချယ်ပြီး မပြဖို့ တောင်းဆိုကြတယ်
သူတို့က သဘာဝကျကျ ရွှင်မြူးနေတဲ့ မျက်နှာလေးကိုသာ
အဲဒီအခါ လူတွေကို ပျော်ရွှင်စေလိုသူ ချာလီဟာ
သာမာန်ထက် ပိုပို ဟန်ဆောင်လာရတော့တယ်
ပထမပိုင်းမှာ လူရွှင်တော်အလုပ်ကို လုပ်တယ်
ဒုတိယပိုင်းမှာ မျက်လှည့်ကို ပြတယ်
ပထမပိုင်းမှာ လူတွေကို ဟန်ဆောင်ပြီး
ဒုတိယပိုင်းမှာ လူတွေကို လှည့်ဖျားတယ်လို့
ဘာခြေရာ လက်ရာမှလည်း မတွေ့ကြဘူး
သူ့နာမည်က ချာလီလို့ခေါ်တယ်။ လူရွှင်တော်အလုပ်ကိုမုန်းတယ်လို့
သူ့လက်ထဲမှာ စာလေးတစ်စောင် ရေးထားခဲ့တယ်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ လောကကြီးကို ဟန်ဆောင်သွားတာလည်း
အနာဂါတ်လှိုင်း၏ ဆုံမှတ်များ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်..။
Posted by moehlaing nya at 4:49 PM
Jazz ဂီတထဲက နင့်ညတွေဟာ လှပနေလား…
ငါ နင့်မွေးနေ့လေးဆီ အရောက်လာခဲ့ပါတယ်….။
Posted by moehlaing nya at 9:25 PM
ငါတို့ဆွဲတဲ့ ဓားကို သူတို့မျက်ရည်နဲ့ ဖယ်ရှားရဲ့
မှောင်မည်းပြီး သဲနဲ့ရှပ်ရှပ် ဘ၀ရဲ့နံရံကို
ငါ့ခေါင်းပေါ်က တိမ်တွေကို သူတို့စိမ်းစိုစေခဲ့တယ်
ဟော့ဒီ ကြက်မတစ်ဝပ်စာကျယ်တဲ့ ရင်ခေါင်းပေါ်
လမင်းကို ဆွဲပြားလေးလိုဆွဲထားတဲ့ ကောင်မလေးရှိတယ်
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစာ တွေးခေါ်နေတဲ့ ယာခင်းတွေရှိတယ်
ဒါဖြင့် လက်ရှိမျောက်တွေက ဘာကြောင့် လူဆက်မဖြစ်သလဲ
အဲဒီလို ထိုးထိုးထောင်ထောင် စိတ်ကူမျိုးတွေနဲ့ပေကျံ
မိန်းမ၊ စကြ၀ဠာ၊ ငွေစက္ကူ
ကမ္ဘာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို စိုက်ပျိုးတယ်
နှစ်ရှည်လများ သိမ်းဆည်းထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေဟာ
သိဒ္ဒတ္ထမင်းသားလည်း ဒီနွံမှာ ကျွံဝင်ခဲ့ဖူးတယ်လို့
ဖြေဆေးကို တစ်တောတစ်တောင်လုံး လိမ်းကျံ
ဘုရားသခင်ဟာ ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်တို့အတွက်
ကြေးစားနံပါတ် တစ်ဆယ်သုံးကို စေလွှတ်ပေးခဲ့တယ်..။…။
ရယ်စရာမဂဇင်း၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၀၁။
Posted by moehlaing nya at 7:59 PM
အဲဒီလိုနဲ့ အလယ်လတ်တန်းစား မြို့ကလေးပျက်သွားတယ်